तपाईंले प्रभु येशू शरीरमा फर्केर आउनुभएको छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। त्यसो भए प्रभु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले किन उहाँलाई देखेका छैनौं? देख्नु नै विश्‍वास गर्नु हो, त्यसैले हामीले उहाँलाई नदेखेका तथ्यले प्रभु अझै आउनुभएको छैन भनी प्रमाणित गर्दछ। जब म देख्छु, तब मात्र यस कुरामा विश्‍वास गर्नेछु। | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तपाईंले प्रभु येशू शरीरमा फर्केर आउनुभएको छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। त्यसो भए प्रभु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले किन उहाँलाई देखेका छैनौं? देख्नु नै विश्‍वास गर्नु हो, त्यसैले हामीले उहाँलाई नदेखेका तथ्यले प्रभु अझै आउनुभएको छैन भनी प्रमाणित गर्दछ। जब म देख्छु, तब मात्र यस कुरामा विश्‍वास गर्नेछु।
अघिल्लो: हामीले विश्‍वास गरेका क्याथोलिक धर्म प्रेरितहरूबाट हस्तान्तरण भएको हो, र यो सबै धर्महरूमध्ये सबैभन्दा परम्‍परा-अनुयायी छ। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली इसाई धर्मसित सम्बन्धित छ, र इसाई धर्म क्याथोलिक धर्मको एउटा शाखा हो। यदि हामी सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौं भने, के हामी इसाई धर्ममा परिवर्तन भइरहेका हुँदैनौं र? अनि त्यसो गरेर, के हामीले हाम्रा परमेश्‍वरतिर पिठिउँ फर्काइरहेका हुँदैनौं र?
अर्को: हामीले यसलाई बुझे अनुसार, धेरै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक विज्ञहरू र शिक्षाविद्हरूले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीलाई उदीयमान इसाई मण्डलीको रूपमा मान्यता दिएका छन्। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली र परम्परागत इसाई धर्मबीच के भिन्नता छ?